लकडाउनमा दिएका सहुलियतलाई राष्ट्र बैङ्कले निरन्तरता दिने, के–केमा छ सहुलियत ? - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहिलो चरणको लकडाउनबाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि दिएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने भएको छ । कोरोनाका कारण भएको लकडाउन र सो लकडाउनले पारेको प्रभाव कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आधा दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा सहुलियतको घोषणा गरेको थियो । अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कनै लागेको बेला कोरोनाको दोस्रो लहरले पुनः धक्का दिएको छ ।
नेप्से २५ अंकले बढ्यो,३ कम्पनीको मूल्यमा सर्वाधिक वृद्धि
निषेधाज्ञाको समयमा पनि पेट्रोल पम्प खुलै रहने
आज बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर